शिवपुराणमा लेखिएका मृत्युका १० संकेत, जुन स्वयम् शिवले बताएका थिए | Rochak Khabar
भगवान शिवसंग सम्बन्धित अनेकौ धर्मग्रन्थ प्रचलित छ, सबैभन्दा बढी प्रामाणिक भने शिव पुराण नै मानिने गर्छ। यो ग्रन्थमा भगवान शिवले माता पार्वतीको लागि मृत्युसंग जोडिएको केही संकेत बताएका छन्। यी संकेतले मृत्यको समय बारे जानकारी दिन्छ।१ . यदि अचानक कुनै व्यक्तिको शरीर सेतो वा पहेँलो भए वा शरीरमा कुनै रातो नशआन देखा परे उसको मृत्यु ६ महिना भित्र हुन सक्दछ।२. यदि कसैको मुख, कान, आँखा र जिब्रोले एक साथ काम गर्दैन उसको जीवनको केवल ६ महिनामात्र बचेको हुनेछ।३. यदि कुनै व्यक्तिको घाँटी र मुख बारम्बार सुख्खा लाग्न थाल्छ उसको मृत्यु ६ महिना भित्र सम्भव छ।४. जब कसैको बाँदा हात लगातार फर्फराउँछ, तालू सुख्छ उसको मृत्यु १ महिना भित्र हुनसक्दछ।५. जसलाई चन्द्र वा सूर्यको आसपास कालो वा रातो घेरा देखाइ दिन्छ। उसकी मृत्यु १५ दिनको भित्र हुन सक्दछ।६. जसलाई चन्द्रमा वा तारा ठिकसंग देखाइदिदैन वा कालो देखाइ दिन्छ उसको मृत्यु १ महिना भित्र हुन सक्दछ।७. जुन मानिसलाई अचानक निलो माखाले घेर्छ, उसको आयु लगभग १ महिना नै बचेको हुन्छ।८. जुन मानिसको शिरमा गिद्ध, काग, परेवा आएर बस्ने छ, उसको मृत्यु १ महिना भित्र हुन सक्दछ।९. जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो छाँया बिना टाउको वाला देख्छ उसको मृत्यु ६ महिनामा हुनेछ।१०. जसलाई आगोको प्रकाश देखाइ दिदैन चारै तिर अध्यारोँ देखाइदिन्छ उसको मृत्यु ६ महिना भित्र हुने पुराणमा उल्लेख गरिएको छ।